I-Superb VIP loft eManapany-les-Bains, ebheke olwandle - I-Airbnb
I-Superb VIP loft eManapany-les-Bains, ebheke olwandle
Manapany-Les-Bains, Saint-Pierre, i-Réunion
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Odile
U-Odile Ungumbungazi ovelele
I-Splendid VIP loft, ilungele i-honeymoon, ethekwini elihle laseManapany, izinyathelo ezimbalwa ukusuka endaweni yokubhukuda yemvelo. Indawo enkulu ebheke e-Indian Ocean kuze kufike lapho ungabonwa khona. Iwindi elikhulu le-bay likuvumela ukuthi ujabulele lesi silungiselelo esiyingqayizivele ungaphakathi kwendawo yokuhlala ngenkathi ugcina ubumfihlo bakho ngokuphelele. Ukuklanywa kwale ndawo yokuhlala kuwubukhazikhazi futhi kuyingqayizivele, kunezinto ezisezingeni eliphezulu nemishini. Ikhofi netiye kuhlinzekiwe. I-Fiber WiFi. Amasokhethi e-USB.
Ngingumdwebi wamapulani futhi ngiklame le ndawo yokuhlala ngokucophelela okukhulu kulesi silungiselelo semvelo esikhethekile. Ukhuni, itshe le-basalt lendawo, ukhonkolo owenziwe wax kudala umoya ofudumele. Konke kwenzelwa ukugcina ubumfihlo kuyilapho ujabulela ukubuka okuhlukile. Ukukhanyisa komklami, umbhede we-memory foam umatilasi, ifeni ethule kakhulu, isimo somoya, ikhishi elifakwe kahle, indlu yangasese ehlukene, indawo yokupaka yangasese, ukufinyelela okuzimele, ... ukunethezeka okuqinisekisiwe.
Akufanele uphuthelwe, isigcilikisha esincane esihlala sikhona saseManapany ngeke sehluleke ukuzibonakalisa ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Itheku laseManapany-les-Bains laziswa kakhulu ngedamu lalo lokubhukuda lemvelo lapho ungabhukuda khona ngokuphepha okuphelele. Ungakwazi futhi ukuhamba ethekwini ukuze ujabulele indawo evundile futhi ubone isigcilikisha esidumile esitholakala eManapany.
Sazi kahle indawo ezungezile futhi sihamba ngezinyawo kuso sonke isiqhingi futhi singakunikeza zonke izeluleko ozidingayo ukuze uhlele ukuhlala kwakho.
Hlola ezinye izinketho ezise- Manapany-Les-Bains namaphethelo